Itoobiya Oo Mamnuucday Skypka. | Gedoonline
Itoobiya Oo Mamnuucday Skypka.	Added by Editor on June 18, 2012.Saved under Latest News	Adis ababa-(GMN) Dowlada Wadanka Itoobiya ayaa mamnuucday adeegsiga aalada Skypka iyo adeegyada qaar ee dadu ay xogaha isku dhaafsadaan.
war lagusoo daabacay bogga BBCda qaybta caalamka la hadasha oo soo xiganaysa Wariyaal aan xuduuda laahyn ee ku sugan dalkaasi ayaa sheegay in xukuumada ay adeegsanayso programyo ay ku weerarayso isticmaalka Skypka.
Waxaa uu sheegay in Dowladu qaraar ay soo saartay 24May ee sanadkan la mamnuucay dhammaan aaladaha la iskala hadlo ee internetka, waxaana qofki lagu arko uu mutaysnaysaa xukun 15sano oo xarig ah.
Afhayeen Dowlada u hadlay oo kusugan Adis ababa laguna magacaabo Anne Waithera uu beeniyay warkaasi waxaana uu sheegay inuusan mamnuuc ahayn isticmaalka Skypka, waxaase mamnuuc ah adeegsiga isticmaalka ee qalalaasaha looga abuurayo Dalka.
Warkan ay BBCdu soo daabacday ma aysan sheegin sugnaanshihiisa dhabta ah , Dowlada Itoobiyana si faahfaahsan ugama aysan hadlin xanibaada la sheegay inay kusoo rogtay aaladaha dadku kukala warqaataan ee dhanka Internetka.
Wariye Itoobiya Lagu Xiray.
Dowladda KMG ah oo mamnuucday ka Ganacsiga Hubka
Itoobiya oo xabsiyada ka sii daysay 402 qof oo ka tirsan ONLF
W.Arimaha Gudaha”Lug Kuma Lihin Bixitaanka Ciidamada Itoobiya”.
Ahlusunna Oo Ka Jawaabay Bixidi Itoobiya.